PC အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်း ၁၀ ခု Gadget သတင်း
ရှင်သန်မှုအမျိုးအစားသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအလွန်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပီစီများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်များကနောက်လိုက်များစွာရှိသည့်ဘဝနှင့်မျိုးစုံကိုပြည့်စုံစေသည်။ ကျနော်တို့ကတည်းကရှိသည် Apocalyptic ကမ္ဘာကိုဖုတ်ကောင်များ၊ အာကာသ Odysseys၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်္ဘောပျက်များနှင့်ဒိုင်နိုဆောများခေတ်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း။ တူညီသောပုံစံဖြင့်တူညီသောကွဲပြားသောကမ္ဘာ၊ အောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောရှင်သန်မှု။
ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်တွင်အမျိုးအစားကိုမှတ်သားဖော်ပြခဲ့သည့် ၁၀ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကိုစွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်စေရန်၊ ကုမ္ပဏီနှင့်တစ် ဦး တည်းအတွက်လနှင့်ချီ။ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ခဲ့သည်။ သငျသညျရှင်သန်, အမဲလိုက်ခြင်း, တည်ဆောက်, ထွက်ပြေး, စားခြင်း, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်အားလုံးအထက်တွင်သမျှအခက်အခဲဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲနေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်၏။ ပူးပေါင်းမှုအပြင်၊ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းအမျိုးအစားတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေမည်မှာသေချာသည်။ ပီစီအတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုအကောင်းဆုံးနမူနာ ၁၀ ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေပါ။
1 သေတ္တာတော်: Survival အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ
4 Conan ပြည်ပရောက်
6 Decay2၏ပြည်နယ်
သေတ္တာတော်: Survival အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ
ဒိုင်နိုဆောများ၏အသက်သည်ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလူတစ် ဦး ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ သို့ပြန်သွားသည် ၎င်းသည်စျေးကွက်အတွင်းတွင်အသန့်ရှင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်းမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ပျော်စရာတစ် ဦး လျှင်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကြီးထွားစေသည့်စွမ်းရည်များနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံများစွာကိုရရှိစေသည်။ အားလုံး ဒိုင်နိုဆောများပြည့်နှက်နေသောအန္တရာယ်ရှိသောကျွန်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။
ဒီဂိမ်းကပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာဖြစ်လို့မြေပုံတစ်ခုလုံးကိုအစကတည်းကသော့ဖွင့်ထားတယ်၊ ၎င်းသည်အစောပိုင်းသုံးစွဲမှုဂိမ်းတစ်ခုအနေနှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အစောပိုင်းအသုံးပြုသူများသည်အဆုံးမဲ့ bug များခံစားခဲ့ရသည် ကြောင်း၏နက်ရှိုင်းခံစားတားဆီး။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လုံခြုံစွာနေနိုင်ရန်စွန့်စားခန်းတစ်ခုကြုံတွေ့ရသည် အစားအစာနှင့်ရေကိုယူအပူချိန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်စာရိတ္တသည်ကမ္ဘာတွင်စွဲမြဲနေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အမိုးအကာတစ်ခုဆောက်လုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ထိုနေရာတွင်နေထိုင်သောဘေးအန္တရာယ်များမှညညလုံခြုံစွာနေနိုင်သည်။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုစိုက်ပျိုးနိုင်တယ် အခြားမြို့သားနှင့်အတူအနွယ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်သောကြောင့်ဤအချက်ကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ထူးခြားသည့်ဂိမ်းများနှင့်မတူသောဂိမ်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရမည့်လှပသောရေအောက်ကမ္ဘာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရသော၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်အလွန်အဖိုးထိုက်သည်။ ကျနော်တို့ဂြိုလ်သားရေအောက်ကမ္ဘာထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ် သောသတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ဘဝလျှံသော။ ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်သည်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များထင်ရှားပေါ်လွင်နေသောလျှို့ဝှက်ထားသည့်အန္တရာယ်များကိုကျော်လွှားရန်နှင့်၎င်းသည်ကန ဦး ထင်မြင်ယူဆရသည်ထက် ပို၍ သေစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အနားယူနိုင်သောနေရာတွင်ခိုလှုံရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းအတွက်ကျယ်ပြန့်သောမြေပုံတစ်လျှောက်ရှိအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ရှည်လျားသောခရီးများကိုပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသတ္တဝါများကိုရှောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကားများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည် တိုင်းထောင့်ထဲမှာပုန်း။ သင်လှပပြီးအန္တရာယ်ရှိသောအတွေ့အကြုံကိုခံစားလိုပါက Subnautica သည်အထူးအကြံပြုလိုသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြောက်မက်ဖွယ်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှလွတ်မြောက်လာသောအခါသင်၌ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အဆိုးဆုံးအရာကဘာလဲ။ အဲဒီမတော်တဆမှုကိုခံစားပြီးတဲ့အခါငါတို့မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာဘာမှမပိုဆိုးနိုင်ဘူးလို့ထင်လိမ့်မယ်၊ Mutant လူသားစားအပြည့်အဝကြီးမားတဲ့သစ်တောစင်ကြယ်သောပုံစံတွင်တောင်ကုန်းများသည်မျက်စိရှိသည်။ ဒီဂိမ်းကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမပေးပါဘူး အချိန်တိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုခုစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုခံစားရသည် ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်။ ဘယ်တော့မှလုံခြုံမှုမရှိဟုခံစားရသောကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ထွက်ပြေးရန်သို့မဟုတ်ရန်ပွဲတစ်ခုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတိကိုလျှော့။ မရပါ။
ဤစွန့်စားမှုသည်သစ်ပင်တစ်ပင်စီ၏နောက်ကွယ်တွင်အန္တရာယ်များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အန္တရာယ်များ၊ ၎င်းကိုဆန့်ကျင်သောကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်မှာလက်နက်များဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ ချမ်းအေးမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စခန်းများနှင့်မီးပုံများကိုဆောက်လုပ်မည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ထာဝရဖုံးကွယ်လို့မရဘူး၊ စွန့်စားခန်းမှာဆက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ရေးနဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုစုဆောင်းဖို့စူးစမ်းလေ့လာဖို့လိုလိမ့်မယ်။
နာမကိုအမှီအကြံပြုအဖြစ်, ဒီဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် Conan the Barbarian ၏လေထုအပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးနွယ်စုများ၏ဘုန်းအသရေကိုပြန်လည်ရယူရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနယ်မြေများကိုအောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားရမည့်ကမ္ဘာတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောနေရာများနှင့်နေရာများပြည့်နှက်နေသောကြွယ်ဝသောကမ္ဘာကိုရှာဖွေရမည် အမြဲတမ်းရာသီဥတုကိုအမြဲဂရုပြုပြီးအအေးနှင့်အပူနှစ်မျိုးလုံးသည်သေစေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်စက်သောလူ့ရန်သူများသာမကသတ္တဝါများနှင့်လည်းရင်ဆိုင်ရမည်။
အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့အနားယူခြင်းအတွက်အခြေခံကျတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုလိုထင်ရသော်လည်း၎င်း၏ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည့်ထောင့်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် လျှို့ဝှက်ချက်များစွာရှိသည်။ ကျနော်တို့မြို့များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကာကွယ်ရေးအကြားတိုက်ပွဲများရင်ဆိုင်ရရပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Conan စကြာ ၀ universeာ၏ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤဂိမ်းသည်သင့်အားနာရီပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စေလိမ့်မည်။
PC ပေါ်တွင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအမျိုးအစား၏ရှေ့ဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် တစ်ဖုတ်ကောင်ကပ်ရောဂါအားဖြင့်ကပ်ကမ္ဘာပျက်။ သူတို့၏ဂိမ်းများသည်လုံးဝအွန်လိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအသုံးပြုသူများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံလိမ့်မည် ငါတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားနိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ် ငါတို့ကိုမျိုချင်သောသေလွန်သူနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုယူလိုကြသည့်လူ့ရန်သူနှစ် ဦး စလုံး။
Chernarus, ဂိမ်း၏မြင်ကွင်းတစ်ခုက၎င်း၏ခံစားခဲ့ရသောကူးစက်ရောဂါကြောင့်၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏စွန့်ပစ်ခြင်းနှင့်လျစ်လျူရှုခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရောက်နေသောကမ္ဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လမ်းများပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဖုတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သည့်အပြင်ရောဂါများကိုပင်ဖမ်းဆီးနိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာများကိုသတိပြုရမည်။ ရာသီဥတုလည်းအရေးကြီးတယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်တဲတွေဆောက်ရမယ်ဒါဟာလုံးဝလုံခြုံမှုရှိနိုင်တဲ့နေရာအနည်းငယ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်လို့ပါ။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာရပ်ရွာဖြစ်သည်။ developer များရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်ညံ့ဖျင်းပြီးအချို့သောသုံးစွဲသူများသည်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် hacks များပြုလုပ်ကြသည် အခြားအသုံးပြုသူများသို့။
Decay2၏ပြည်နယ်
ကူးစက်ရောဂါကြောင့်မသေသပ်သောကမ္ဘာကြီးပိုမိုပျက်စီးခြင်းသည်ဤရှင်သန်မှုဗီဒီယိုဂိမ်း၏ခေါ်ဆိုမှုကဒ်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဂိမ်းတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့ရည်မှန်းချက်များကိုစတင်သည့်အချိန်တွင်၎င်းနှင့်နေထိုင်သူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှင်သန်ရန်ဖုတ်ကောင်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ခိုလှုံရာကိုလုယူလိုကြသောအခြားလူသားများကိုလည်းအထူးဂရုပြုရမည်။
ဒီဂိမ်းကအွန်လိုင်းဖြစ်ပြီးတစ်ယောက်တည်းကစားတဲ့သူကပျော်စရာကောင်းတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့်အွန်လိုင်းတွင်ကစားခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုလေးနက်သောအရာအဖြစ်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုခြင်းသည်ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်မျှဝေခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ ဒါတွေအားလုံးအတွက် ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ငါတို့ကစားအခါတိုင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်တိုးတက်ကြပြီခံစားချက်ရှိလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရောင်ငရဲခေါင်းစဉ်ကိုယ်တိုင်ပြောထားသလို၊ ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းသည် အမေဇုံတောတွင်း၌ထားကြ၏။ ဒီလှပပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းမှာငါတို့တစ်ယောက်တည်းနေရတော့မယ်၊ ငါတို့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ရန်သို့မဟုတ်ပူနွေးစေသောမီးကိုဖန်တီးရန်သာမကငါတို့ခိုလှုံရာတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ဂူထဲ၌လုပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ငါတို့ဇာတ်ကောင်တွေသူ့စိတ်ကိုမေ့သွားပြီဆိုတာမသိတဲ့အထိအဲဒါဟာတောတွင်းမှာရှိတဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းလိုပါပဲ။ ဒီမူကြမ်း၏အခြေအနေတွင်၎င်းသည်အပြည့်အဝဖိအားပေးနိုင်သည်ဟုဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့်သေဆုံးနိုင်ရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသောအနာများသို့မဟုတ်ကူးစက်ရောဂါများကိုကုစားရန်လိုသည်။ ၎င်းတွင်ကြွယ်ဝသောခန္ဓာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်ပါဝင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကုသရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွန့်စားမှုတစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေ၊
Rust တွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဤလောကသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှစွန့်စားမှုစတင်ခဲ့သည်, လုံးဝအဝတ်အချည်းစည်း, ဒီအခွအေနသက်သာစေဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းကိုဖော်ပြသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစာကျွေးဖို့အမဲသားနဲ့အရေခွံတွေလုပ်ဖို့ကျောက်ခဲတွေ၊ သစ်လုံးတွေရှာကြမယ်။ ဒါကလွယ်ကူပေမယ့်ပုံရသည် ဒီဂိမ်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုလုယက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့အောင်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်။
တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများသည် Rust တွင်အဆက်မပြတ်ရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရွာကိုတည်ဆောက်ပြီး၎င်းတို့မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုခိုင်ခံ့စေရမည်။ ၎င်းသည်အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လူသားများသည်ကမ္ဘာတစ်လွှားမှအခြားကစားသမားများဖြစ်သည်။ သော့ချက်ဆောက်လုပ်ရေးအပေါ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအာရုံစူးစိုက်နှင့်အတူ, ပစ္စည်းလက်မှုပညာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်အဖြစ်ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာအခြားကစားသမားများနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည် အားလုံးအန္တရာယ်များကိုအတူတကွစစ်တိုက်ခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေရန်။
အချိန်ကုန်ဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်း, ဒီအမျိုးအစား၏လူကြိုက်များ၏အကောင်းဆုံးဥပမာသံသယမရှိဘဲ။ ၎င်းသည်ပရိသတ်အားလုံးအတွက်ကောင်းမွန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ရန်လိုမှုများပြည့်နှက်နေသည်။ ဤခေါင်းစဉ်၏ရှုထောင့်မှာသံထည်ပစ္စည်းများဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ အရာရာကသာယာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပုံရရင်သတ္တဝါတွေဆီကနေတခြားအသုံးပြုသူတွေအထိရန်သူတွေရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံရနိုင်တယ်။
မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသောရန်သူအုပ်စုများသည်၎င်း၏immရာမကမ္ဘာတွင်နေထိုင်ကြပြီးအရင်းအမြစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှစုဆောင်းရန်အခိုက်အတန့်တိုင်းအားသာချက်ယူရန်အဆင်ပြေသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းသည်ဂိမ်း၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောထောင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီး၎င်းအတွက်လက်နက်နှင့်လက်နက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကောင်းစွာပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
ကျနော်တို့စာရင်းကိုအခြားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူအဆုံးသတ်, ကျွန်တော်တို့လေ့လာစူးစမ်းတဲ့အရာကအခြားနေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဂြိုလ်ခုနစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေပြင်အနေအထားကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဂြိုဟ်တစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုလေ့လာနိုင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ပုံမှန်အတိုင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုစုဆောင်းရန်အပြင်ယာဉ်များသို့မဟုတ်အခြေစိုက်စခန်းများဖန်တီးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤစာရင်းမှအသင်းဝင်များကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်သမဝါယမကစားနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဂိမ်းရွေးချယ်မှုများကိုများစွာချဲ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရုံသာမကမြေအောက်ကမ္ဘာကြီးကိုလည်းပါရရှိမည်ဖြစ်သည် အဘယ်မှာရှိရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့အဖိုးတန်ဘဏ္asuresာများနှင့်ငါတို့သင်္ဘောတိုးတက်စေရန်ပစ္စည်းများဖုံးကွယ်လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » ဂိမ်းတွေကက » PC အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုဂိမ်း ၁၀ ခု
ကောင်းသောညနေခင်းမှာ၊ ဒီဟာကမှတ်ချက်ပေးဖို့နေရာမှန်လား၊ မသိဘူးလား၊ ငါတောင်းပန်ပါတယ်! ပြနာကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါတို့သီးသန့်စုံထောက်စုံဘာစီလိုနာတွေကစားတာပါ။ အခုငါတို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ၊ ငါတို့ကစုံထောက်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအချို့ကစားချင်တယ်ဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာကိုရှာဖွေနေပြီးကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!!